Ereyada caan ah - asalka iyo macnaha
Hadalka | Luqadda Luqadda
Nuts iyo bolts
Dhibicda oo dhan
"Laugh ayaa jecel digaagga", "istaaga tuubada", "maalin ka bixi" - kuwani waa dhammaan weedhaha aan ku isticmaalno nolol maalmeedka, iyagoo aan ogeyn halka ay ka yimaadeen. Inkasta oo aynu ognahay waxa aynu ula jeedno taas, qof kastana wuu fahamsan yahay macnaha ka dambeeya, laakiin haddii aad si dhow u eegto soo bandhigidda xukunka, waxay caadi ahaan aad u xiiso badan yihiin ama ma aha wax macquul ah maalmahan.
Dhibaatooyinka - macnaha iyo asalka
Hadal badani waxay ku sameyn karaan casriyeynta, si ay u siiyaan sawir cad oo mar labaad. Kaliya erayadan casriga ah sida caadiga ah kama badna, mar walbana waxaan ku dhicin kuwa asalka ah. Waa waqtigii si aad u soo dhawaato asalka.
Ereyada caan ah ayaa si fudud loo sharraxay
Xadgudubyada waa dhisme eray ah oo go'an oo aan la isku bedeli karin sababtoo ah hadii kale sawirka guud waa sax maahan. Laga soo bilaabo "jiifka cirka ee samada" ma noqon karo "casaanka samada si uu u seexdo", sababtoo ah qofna ma fahmi karo waxna kama dhigayo.
Xadgudubyada waa sheekooyin muuqaal ah oo si fiican loo yaqaan iyo luuqada ku hadla. Tani waxay sidoo kale ku qoran tahay luqado kale. Inkastoo ay "roobab" nala joogaan, waxay ku da'aysaa England "Bis iyo Eeyo" - sida bisadaha iyo eeyda. Wadankan, waan fahmi kari lahayn, England, dhinaca kale, midna ma fahmi karo boobka.
Waxaan soo ururinnay jumladaha ugu caansan waxayna dareemeen "ilig". Halkan xitaa waad arki kartaa naftaada halka ugu caansan ay leeyihiin qabiilkooda.
"Waxbarasho dugsi oo wanaagsani waa Alfa iyo Oogega oo bilaabaya xirfad," ayaa ayeeyeeydeed ayeeyeed, oo ayeeyadiis Frederike, u eegaysa walwalka fasalada ilmaheeda. Frederike wuxuu ogyahay in ayan magaceeda ku soo xaadirin warbixinta bartamaha sanadka oo ay ka jawaabto jilicsanaanta in ay ka fiicnaan doonto lixda bilood ee soo socota.
Muxuu weedha "alpha and omega" macnaheedu?
Kadibna waxay waydiisanaysaa awowgeed sababta waxbarashadu u noqon lahayd alpha iyo omega oo ah inay bilaabaan xirfad. Aabaha ayaa jawaab u ah, "Taas macnaheedu waa bilowga iyo dhammaadka. Haddii aad bilowdo dareenka ugu weyn ee iskuulka, waxaad ku dhameysan doontaa shahaadada wanaagsan oo baran kartaa wax kasta oo aad rabto. "
Ka dib markii duhurkii, Frederike wuxuu tagaa guriga si uu u muujiyo darajooyinka waalidkeeduna sidoo kale. Waxay ka fekereysaa sababta ay awo u dhigtay A ee bilawga ah, laakiin O dhamaadka. Waxaa suurtagal ah in awoowgu aanu akhriyi karin oo qori karin?
Hooyo Frederike waa in ay ku qoslaan bayaankan gabadheeda oo ay sharaxdo:
"Giriiga Giriiggu wuxuu A" A for Alpha "u yahay warqadda ugu horeysa iyo O Omega oo ah warqaddii ugu dambaysay. Ereyada waxa ay ka timid tarjumaadda Kitaabka Quduuska ah Martin Luther. Ilaah wuxuu leeyahay, "Anigu waxaan ahay Alfa iyo Omega, bilowgii iyo dhammaadka ..." erayadani waxay ka yahiin Muujintii Yooxanaa Naxariis inuu ogaado: "Taasi micnaheedu waa; oo isagu waa bilowgii iyo dhammaadkoodii dhimashada. Sidaas darteed, awoodda aqoonta ayaa la muujiyay. "
Frederike waa mid aad u soo jiidasho leh waxaana go'aansanaya in mustaqbalka ay rabto in ay isha ku hayso wax walba oo ay hagaajiso darajooyinka dugsiga.
Anke waa murugo. Waxay rabtay in ay tagto filimka iyada oo la joogo saaxiibkeeda ugu fiican maanta, laakiin waxay joojisay waqtiga ugu dambeeya. Stefan, Anke walaalkiis weyn, wuxuu isku dayaa inuu ku raaxeysto. "Marka aad tagto filimka berri, ma aha wax xun."
Muxuu weedha "qodobka muhiimka ah" macnaheedu?
"Berito ma aha maalin shineemo ah, filimkuna waa 2 euro oo dheeraad ah. Xaqiiqdu waxay tahay, ma haysto lacag badan oo jeeb ah. "
Ma ahan xaalad fiican, laakiin waa inaad ku qososhaa hadalka ku qoran bayaankan.
Waa maxay qodob muhiim ah? Miyuu xayeysiisku u boodi karaa si farxad leh? Hadday sidaas tahay, maxay tahay in taas lagu sameeyo qoraalka?
Weedhani waxay muujinaysaa xaalad degdeg ah ama muhiim. Waxay ka timaaddaa Aristotle, oo ogaaday in dusiga ukunta ukunta digaaga digaaga ah uu yaraado oo hoos u dhaco marka uu dhasho.
Tilmaam yari waa wadnaha iyo sidaas darteed xubnaha ugu muhiimsan ee digirta sii kordhaya. Oo sidaas daraaddeed hadalka ku qoran bayaanku wuxuu tilmaamayaa waxa ugu muhiimsan halkan.
Ka dhaadhicinta ciribta
Wuxuu sheegay in uu ku jiro 180
Dhibaatooyinka - Waxaan isku xiri doonaa xargaha
Dhibaatooyinka - Dhismayaasha dhismaha waa la yaabay
Jumladaha Jarmalka ee Ingriiska | Qosolka Denglish